नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दलको ६ वटा मन्त्रालयमा दाबी - EKalopati
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दलको ६ वटा मन्त्रालयमा दाबी
एमालेबाट अलग्गिएको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दल दर्ताको सनाखत सकिएको छ ।आजै दलदर्ताको प्रमाणपत्र दिने तयारी भएको बुझिएको छ । सांसद मेटमणी चौधरीले पार्टी दर्ता भएसँगै मन्त्रिमण्डल विस्तारको कामले तिव्रता पाउने बताए ।
‘एमालेमा हुँदा केही कानूनी समस्याहरु थिए तर, आज नयाँ पार्टी दर्ता भयो । भोली पर्सीसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छ,’ सांसद चौधरीले भने । उनले सरकारमा सहभागिताका लागि गठबन्धनका दलहरुसंग छलफल भइरहेको बताए ।
यता जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पार्टी एक हप्ताभित्रै सरकारमा सहभागी हुने बताएका छन् । तराई–मधेस र पहाडको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी आधारमा पार्टी सरकारमा जाने उनको भनाइ छ ।
महन्थ ठाकुरले प्रतिगमनको मतियार बन्दा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर गुमाएको टिप्पणी गर्दै डा. भट्टराईले ठाकुर–महतोलाई ‘खानेबेलामा अभागीलाई रिस उठे’जस्तै भएको भन्दै व्यंग्य गरे ।
त्यसअनुसार नै देउवा नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सहभागी हुनेछन् । ठाकुर पक्षले पनि सरकारमा समान सहभागिता हुनुपर्ने बताएको छ ।
Previous articleमहानगरले कर नतिर्ने करदाताको घरमा पञ्चेबाजा बजाउने
Next articleमहन्थ पक्षबाट १८ दिन मन्त्री भएका प्राय: सबै लोकतान्त्रिक समाजवादीमा